Showing १-१० of ५६९ items.
स्थानीय तहमा छाएको शून्यताबारे सोचौं
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको बिहीबारबाट समयावधि सकिएको छ । मतगणना नसकिएकाले अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छैनन् । पहिलेका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको र नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आइनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहहरू केही समयका लागि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । जुन संविधानको परिकल्पनाविपरीत हो । किनभने संविधानले स्थानीय तह एकदिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन हुन नहुने मान्यता राखेको छ । सोहीअनुसार होला कि नहोला भन्दाभन्दै निर्वाचन त सम्पन्न भयो तर, मतगणनामा ढिलासुस्ती हुँदा स्थानीय तहहरू रिक्त बनेका छन् । सपथ नलिएसम्म जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्न नसक्ने हुँदा अहिलेको
प्रकाशित मितिः जेठ ६, २०७९
६५ पटक पढिएको
कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याऊ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ । त्यसका लागि मङ्गलबारदेखि संसद् सुरु भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सरकारले जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । त्यसैका लागि सरकारले बजेट तयारी थालेको हो । यसपटकको बजेट सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ध्येयका साथ बजेट ल्याउन लागिएको सरकारले जनाएको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता राखेर ल्याउन लागिएको भनिएको बजेटले कति महŒव राख्ला ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । नेपालमा हरेक वर्ष आउने बजेट महŒवाकाङ्क्षी मात्रै छैन, कार्यान्वयन तहमा निकै सकसपूर्ण खालको आउने
प्रकाशित मितिः जेठ ५, २०७९
दलहरुले सिक्नु पर्ने पाठ
स्थानीय तहको निर्वाचनको मत गणना चलिरहेका बेला देशैभर राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनौती दिइरहेका छन् । लामो समयदेखि सत्ताको अनुभव बटुलेका, टोल तहसम्म सङ्गठन विस्तार गरेका र लाखौं कार्यकर्ता भएको दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनौती दिनुलाई सामान्य रूपमा मान्नु हुँदैन । हुन त अन्तिम मत परिणाम आउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । अन्तिम परिणाम जे सुकै भए पनि अहिलेसम्मको मत गणनाका क्रममा स्वतन्त्र उमेदवारहरूले जुन किसिमले स्थापित राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई चुनौती दिएका छन्, त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन । जारी मत गणनाको परिणामले के देखाउँछ भने आम मतदाताहरू राजन
प्रकाशित मितिः जेठ ४, २०७९
मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको सन्देश
बुद्धको २५६६ औं जन्मजयन्तीकै दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन् । बुद्धको जन्मस्थलमा आई प्रधानमन्त्रीले विश्वलाई के सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छन् ? नेपालसँगको प्रगाढ सम्बन्ध रहेको देखाउन चाहन्छन् कि चीनको तुलनामा भारतको प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन् ? प्रधानमन्त्री मोदीको रणनीति के हो ? यस्ता आम जिज्ञासा उत्पन्न हुन थालेको छ । यसको प्रमुख कारण चाहिँ भारतीय मिडियाहरूले गरेको प्रचार शैलीलाई लिइन्छ । प्रधानमन्त्री मोदी अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण नगरेको विषयलाई भारतीय मिडियाले यसरी प्रचार गरे कि जुन विषयमा कुनै सत्यता थिएन र छैन । चीनको कम्पनीले निर्मा
प्रकाशित मितिः जेठ ३, २०७९
७२ पटक पढिएको
मतगणनाको गति बढाउन आवश्यक
देशभर वैशाख ३० मा निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरूको मतगणना जारी छ । कतिपय पालिकाका मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेका छन् भने अधिकांश पालिकामा सुस्त गतिमा गणना अघि बढिरहेको छ । सोचेभन्दा मतगणना एकदमै सुस्त गतिमा भएपछि निर्वाचन आयोगप्रति आलोचनासमेत भइरहेको छ । अहिलेकै शैलीमा गणना हुने हो भने महानगर र उपमहानगरहरूमा मत परिणाम आउन १५ देखि २० दिनसम्म लाग्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । मत गणना सुस्त हुँदा गणनामा सहभागी हुनेहरू मात्र होइन, मत परिणाम सुन्न पर्खिनेहरू धेरैको समय बर्बाद भइरहेको छ । सबैको समयको महŒव बुझ्न आवश्यक छ । त्यसकारण मतगणनाको गति बढाउन आवश्यक देखिन्छ । पहिले नै निर्वाचन अयोगले पाँच दिनभि
प्रकाशित मितिः जेठ २, २०७९
८५ पटक पढिएको
भयरहित चुनावको वातावरण बनाऊ
आज (शुक्रबार) देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनलाई भयरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष साथै पारदर्शी बनाउन गृहमन्त्रालय, सुरक्षा निकायहरू भरमग्दुर प्रयासरत छन् । निर्वाचन आयोगले आचार–संहिता कार्यान्वयन गराउन पनि उस्तै प्रयास गरेको अवस्था छ । तर, पनि छिटफुट रूपमा केही घटनाहरू भएका छन् । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । मौन अवधि सुरु भइसकेपछि दल तथा दलका कार्यकर्ताहरू मतदातासँग सुटुक्क भेट्ने र मतलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरिनु आफैमा राम्रो कार्य होइन । यसले पनि निर्वाचनको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्छ । एकातिर राज्य निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन लागिपरेको छ भने अर्कोतिर राज्यको नीति बनाउने निका
प्रकाशित मितिः बैशाख ३०, २०७९
७६ पटक पढिएको
मतदाता शिक्षामा चुकेको निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार ७७ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ६ सय ७६ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई मतदाताहरूलाई मतदान गर्ने सही तरिकाबारे जानकारी गराउन निर्देशन त दियो तर, यो निर्देशन झारा टार्ने शैलीबाहेक अरू केही पनि होइन । आयोगले नमुना मतपत्रलगायत पोष्टर, ब्रोसर आदि छपाइ सामग्रीको माध्यमबाट मतदान गर्न सिकाउन निर्देशन दिएको छ । जब कि चुनाव वैशाख ३० गते अर्थात् एक दिनमात्र बाँकी छ । भोलि (शुक्रबार) बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु हुँदैछ । तीन महिनाअघि समय छँदै आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कतै पनि लागू गरेन । सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा चुनाव गराउन ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आयोगलाई दिएको
प्रकाशित मितिः बैशाख २९, २०७९
८३ पटक पढिएको
मौन अवधिःनिर्वाचन आचार–संहिता पालना गरौं
मङ्गलबार मध्यराति १२ बजेदेखि मौन अवधि लागू भएको छ । वैशाख ३० गते बिहानदेखि साँझसम्म मतदान केन्द्रमा गई मतदाता आफूले इच्छाएको उम्मेदवारलाई मतदाताहरूले भोट दिनेछन् । निर्वाचन धाँधलीरहित, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले ४८ घण्टे मौन अवधि तोकेको हो । निर्वाचन आयोगले यो मौन अवधिमा स्थानीय तह अन्तर्गत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, पालिकाहरूका वडाध्यक्ष, वडासदस्यका उम्मेदवारको बारेमा दल, तिनका भ्रातृसङ्गठन, उम्मेदवार, सङ्घ–सङ्गठनलगायतले राजनीतिक प्रचार, भेला र गोष्ठी आयोजना गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । आयोगको आचरण न
प्रकाशित मितिः बैशाख २८, २०७९
मतदाताले विवेक प्रयोग गर्ने बेला
यतिबेला गाउँदेखि सहरसम्म चुनावी माहोल तातेको छ । चुनावको माहोल जमेसँगै मतदाता फकाउन राजनीतिक दलका नेताहरू विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । उम्मेदवारहरू विभिन्न आश्वासनसहित घरदैलोमा पुगेर भोट फकाइरहेका छन् । आफूले जितेमा विकासको मूल फुटाउने वाचासहित मतदातालाई विश्वस्त तुल्याउन नगरदेखि वडासम्मका बेग्लाबेग्लै प्रतिबद्धतापत्र वितरण गरिरहेका छन् । यो त निर्वाचनका बेला सबै राजनीतिक दलले मतदातालाई प्रभाव पार्न गर्ने नियमित र सामान्य क्रियाकलाप नै भयो । पछिल्लो समय भने निर्वाचनका बेला आश्वासन पत्र मात्र होइन, नगदसमेत वितरण गरेर भोट खरिद हुने गरेको चर्चा परिचर्चा चल्छ । यसपटकको निर्वाचनमा समेत विभिन्न ने
प्रकाशित मितिः बैशाख २७, २०७९
६७ पटक पढिएको
धम्की र गालीको राजनीति कहिलेसम्म ?
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँंदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू चुनावी अभियानमा देश दौडाहामा छन् । आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन विभिन्न ठाउँमा नेताहरू पुग्नु र उनीहरूको पक्षमा माहोल बनाउन सहयोग गर्नु स्वभाविक हो । यस्ता सभाहरूमा केन्द्रीयस्तरका नेताहरूले आफ्नो पार्टीका विकास योजनाहरू आम नागरिक समक्ष सुनाउने र सकेसम्म अन्य दलमा आस्था राख्ने मतदातालाई समेत आफ्नो दल र उम्मेदवारलाई मत दिन आकर्षित गर्नुपर्ने हो । तर, केही दिन यताका प्रमुख नेताहरूका भाषण सुन्दा उनीहरू पार्टीका विकास नीति तथा योजना सुनाउनभन्दा अर्को दल र नेतालाई गाली गर्न, अरूलाई गलत देखाएर आफू राम्रो बन्ने प्रयास मा
प्रकाशित मितिः बैशाख २६, २०७९
९९ पटक पढिएको